Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Uniglobe dia manamarika ny tsingerintaona 40 taona miaraka amin'ny fanantenana sy ny fifantohana amin'ny ho avy
Uniglobe, orinasam-pitantanana fitetezam-paritany mitarika ho an'ny tsena SME manerantany, manomboka anio faha-40 taonany miaraka amina andiany iray # Uniglobe40Strong fisehoan-javatra hanaiky ny fahombiazan'ny orinasa efa-polo taona ary hanamafisana ny andraikitry ny orinasa amin'ny ho avin'ny fitsangatsanganana.
Ny hetsika voalohany dia webinar iray manerana ny orinasa havoaka amin'ny mpiasan'ny masoivohon'ny Uniglobe miisa 3,800 manerana ny kaontinanta enina. Haneho ny 40 ny orinasath fanentanana amin'ny marketing tsingerintaona, "Mametraka anao voalohany mandritra ny 40 taona," natao hampisehoana ireo tantaran'ny fahombiazan'ny mpanjifa Uniglobe mandritra ny taona 2021 amin'ny alàlan'ny fantsona media sosialy.
Manome voninahitra ny dingana lehibe anio ny Uniglobe Founder, filoha & CEO, U. Gary Charlwood, ilay mason-tsivana amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizakan-tena manerantany izay nanangana ny orinasa tamin'ny taona 1981 tao Vancouver, BC
"Androany isika dia misaintsaina ny lasa ary mankalaza izay rehetra nandray anjara tamin'ny fitomboana niavaka nataon'i Uniglobe tao anatin'ny efa-polo taona lasa izay," hoy i Charlwood. “Ny iraka ataontsika anio dia mazava toy ny tamin'ny voalohany ihany: Hahatonga ny fahombiazan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny dia lavitra. Hanao izay rehetra azonay atao izahay mba hanampiana ny mpanjifantsika hanangana ny orinasany sy hivoatra. Ny soatoavina izay namaritra antsika efa-polo taona lasa izay dia manohy mitondra valiny ankehitriny amin'ny alàlan'ny serivisy manokana sy ny fahaizan'ny dia lavitra tsy manam-paharoa. Androany, manerana ny firenena 60, ireo matihanina Uniglobe dia manampy ny mpanjifany orinasa sy fialam-boly 'mandeha tsara' amin'ny famahana olana sarotra, fitadiavana vahaolana vaovao ary fikarakarana izay ilaina rehetra. Io no marika mampiavaka ny fianakavian'i Uniglobe, ary hanohy hampiavaka antsika mandritra ny am-polony taona ho avy io. ”
"Faly aho fa misolo tena ny orinasa iray izay nifikitra hatrany tamin'ny soatoavina niorenany nandritra ny efa ho zato taona," hoy i Martin Charlwood, filohan'ny Uniglobe & Chief Operating Officer. “Ny fanoloran-tenantsika tanteraka sy ny fitiavantsika ny dia dia mamaritra hoe iza izahay; izany no votoatintsika. Hatramin'ny niorenan'ny orinasa tamin'ny taona 1980, dia nahita fiovana maro nanakorontana ny indostrianay isika - indraindray hatramin'ny tena fotony - hatramin'ny fanapahana komisiona ka hatramin'ny lavenona volkano ka hatramin'ny areti-mandringana manerantany. Na dia fantatsika aza fa miova tsy tapaka ny tontolon'ny dia, dia takatsika ihany koa fa ny matihanina amin'ny dia an-tanana ary mahay miasa dia manana andraikitra lehibe amin'ny fanampiana ireo mpandeha hivezivezy amin'ny fisalasalana rehetra. Ny toe-tsaina 'afaka atao' dia ny ADN Uniglobe izay hitarika ny orinasanay handroso mandritra ny 40 taona sy ho avy. ”
Fifantohana amin'ny ho avy
Mandritra ny taona 2021, Uniglobe dia hampiantrano andiana hetsika virtoaly hankalazana ny tantaran'ny orinasa 40 taona miaraka amin'ireo mpandahateny vahiny avy amin'ny indostrian'ny fizahan-tany. Amin'izao fotoana izao, ny hetsika rehetra dia horaisina ho an'ny masoivoho Uniglobe sy ny mpiasa manokana. Na izany aza, rehefa mihena ny fameperana areti-mifindra COVID-19, dia mety ho tafiditra ao ny mpihaino ivelany (mpanjifa, mpamatsy ary ny indostria). Mifandraisa Uniglobe raha mila fanazavana fanampiny.
Momba ny Travel Uniglobe
Uniglobe Travel dia natsangan'i U. Gary Charlwood niaraka tamin'ny masoivoho voalohany natsangana tao Vancouver, BC, Kanada tamin'ny 1981. Androany, ny tambajotra manerantany dia misy olona 3,800 amin'ny firenena 60 amin'ny kaontinanta enina manompo firenena 90. Ny orinasa dia miteraka varotra isan-taona amin'ny $ 5 miliara dolara amerikana (pre-pandemie).
Uniglobe Travel dia mampiasa teknolojia ankehitriny sy vidiny tiana kokoa handefasana serivisy fitantanana fitetezana faratampony miaraka amin'ny fomba eo an-toerana sy mifantoka amin'ny mpanjifa. Miompana amin'ny dia lavitra ataon'ny orinasa kely sy salantsalany (SME) ary koa fialam-boly, tanjon'i Uniglobe ny hitondra fahombiazana amin'ny alàlan'ny dia lavitra. Ny orinasa dia mifantoka amin'ny fitsaboana ireo mpiara-miasa amin'ny masoivoho toa ny fianakaviana, izay mandray ny mpanjifany toa ny fianakaviana. Hamaky bebe kokoa.
Momba an'i U. Gary Charlwood
Teratany alemanina U. Gary Charlwood dia nahafantatra fa te-hiditra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany izy rehefa nandray asa ho toy ny mpitari-dalana hizaha ny fianarany amin'ny anjerimanontolo any Angletera. Tamin'ny tapaky ny taona 1960 dia nafindrany tany Canada ny fianakaviany ary niditra ho mpikarakara ny zotram-piaramanidina izy.
Taorian'ny niasa ho an'ny Canada Pacific Air Lines, Charlwood dia nanaraka ny toetra nalain'ny mpandraharaha ary nividy ny zon'ny tompona kanadianina tompon'ny marika Century 21. Tamin'ny 1981, nanangana ny marika iraisam-pirenena momba ny franchise izy, Uniglobe Travel International.
Androany, Charlwood dia tantaram-pahombiazana amin'ny franchise franchise, mpandahateny iraisam-pirenena ary mpanoro hevitra momba ny orinasa. Izy dia mpandray anjara amin'ny Hall of Fame International Association of Travel Agents (ASTA) ary ny Fikambanan'ny Fikambanam-bahiny Iraisam-pirenena (IFA) Charlwood no olom-pirenena tsy amerikana voalohany nitana ny toeran'ny IFA Chair ary izy no filoha mpanorina ny ASTA Corporate Advisory Council izay miaro ny indostrian'ny fizahan-tany.
Amin'ny maha-mpanorina, filoha & CEO an'ny Charlwood Pacific Group an'ny fianakaviana azy, Charlwood dia manara-maso ireo orinasan-tseranana Uniglobe Travel International, Century 21 Canada Real Estate, Centum Financial Group ary Real Estate Management, Canada avy amin'ny foibe maneran-tany ao Vancouver, Canada. Hamaky bebe kokoa.